स्थानिय सभा र श्रोता समुहको पहलमा अमरगढी नगरपालिका ९ का सबै गाउमा कृषि समुह गठन ।
मङसिर ४ , डडेल्धुरा
अमरगढी नगरपालिका– ९ मा ११ वटा गाँउमा कृषि समुह गठन गरिएका छन । कृषिमा दिईने अनुदान वास्ताविक कृषकले पाउन भन्ने लक्ष्यका साथ वडाका ११ वटै गाउमा कृषि समुह गठन गरिएको वडा अध्यक्ष भिम बहादुर रोकायाले बताउनु भयो । वडामा पहिले एक–दुई वटा कृषक समुह मात्रै थिए ।
स्थानिय सरकारले दिने अनुदानमा वास्ताविक भन्दा पनि पहुच वालाले मात्रै अनुदान पाउन थाले पछि कृषक समुह बाटै सिफारिसका आधारमा अनुदान वितरण गर्न सबै गाउमा कृषक समुह गठन गरिएको उनले बताउनु भयो । कृषक समुह गठन पछि समुहले कृषक छनौट गरी अनुदानका लागी सिफरिस गर्ने भएकाले वास्ताविक व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्नेले मात्रै अनुदान पाउन थालेको उनको भनाई छ ।
यसै बर्ष मात्रै आलुको बिउ ६० क्विण्टल बढी माग भई आए पनि ३० क्विण्टल मात्रै विरतरण भएको उनले बताउनु भयो । माग भए पनि अनुदानको आलु बिउ गाँउमा पुग्दा लगाउन नसक्ने जनाउदै माग भई आएको आधा आलुको बिउ मात्रै वितरण भएको उनले बताउनु भयो । यस बाटै वास्तविक किसानको परिचय खुलेको उनको भनाई छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा स्थानियवासीले कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य क्षेत्रका सेवा सुबिधा सहजै रुपमा पाउन थालेका छन । पहिलेको तुलनामा पछिल्ला बर्षहरुमा सेवा सुबिधामा सरल पहुच बढ्दै गएको छ । संविधानमै मौलिक हकका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य उल्लेख गरिय संगै चेतनाको स्तर बढे पछि समान रुपमा सरल पहुच बढेको हो ।
अमरगढी नगरपालिका ८ र ९ वडामा नागरिक समाज पारस्पारिक जवाफ देहिता परियोजना लागु भए पछि स्थानियको चेतनाको स्तर बढेको छ । पारस्पारिक जवाफ देहिता परियोजना अन्तरगत सञ्जिवनी नेपालले मार्फत गठन भएका स्थानिय सभा र रेडियो श्रोता समुहले जनप्रतिनिधी, स्थानिय सरकार प्रमुख लाई स्थानियका समस्याको पहिचान गरी घचघच्याउने भएकाले सेवा सुबिधामा स्थानियको समान रुपमा सहज पहुच बढ्दै गएको हो ।
परियोजनाले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । कृषिमा उत्पादनमुखी संगै व्यवसायिक रुपमा स्थानिय लाई अग्रसर गराउन स्थानिय सरकरको दायित्व, गुणस्तरिय शिक्षाका लागी र मौलिक हकका रुपमा संविधानमा उल्लेखित बुदा बमोजिमका सेवा सुबिधा स्थानियले प्रत्याभुत गराउन स्थानिय सरकार संग समन्वय गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।
पहुच हुदै नभएको होईन । वडा अध्यक्ष रोकायाले भने, पहिलेको तुलनामा स्थानिय गाउवासीको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुच बढ्दै गएको छ । २०७३ देखि यो परियोजना लागु भएको थियो । यस परियोजनाले योजनामा बजेट दिने होईन । उनले भने, स्थानिय वासी लाई हक अधिकार बारे जानकारी गराई सरोकारवाला निकाय स्थानिय सरकार लाई जवाफदेही बनाउने हो । स्थानिय जागरुक भए पछि काम गर्न पनि सजिलो भएको छ ।
११ वटा गाउ रहेको वडा नं. ९ मा एउटा स्वास्थ्य चौकी छ । स्वास्थ्य चौकी बाट निःशुल्क रुपमा पाईने ३५ प्रकारका औषधी छन कि छैन्न । गुणस्तरिय शिक्षा । शिक्षा क्षेत्रमा पाईने सेवा सुबिधा र कृषि क्षेत्रमा खास गरी खेती पाती गर्ने किसानले सिचाई, बिउ बिजन, मल लगायतमा अनुदान पायो कि पाएन के कस्तो छ । भनि परियोजनाले स्थानियवासी संग छलफल गरी समस्याको पहिचान गरी स्थानिय सरकार संग जवाफ माग्ने गरेको छ । स्थानिय सभा र रेडियो श्रोता समुहले स्थानिय वासी संग यि यस्ता बिषयमा छलफल चलाउदा उनिहरु आफै योजना माग गर्न पुगेको वडा अध्यक्ष रोकायाले बताएउनु भयो ।
वडा नं. ९ मा पहिलो पटक किसान परिचय पत्र वितरणका लागी पहल गरिएको छ । तर नगर कार्यसमितीको ढिलाईका कराण परिचय पत्र वितरण गर्न नसकिएको उनले बताउनु भयो । वडा नं. ८ मा रहेको भागेश्वर मावि टाँटरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो पटक बन बिज्ञान बिषय अध्यापनका लागी सिटिईभिटीले अनुमती दिएकाले शिक्षा तर्फ १० लाख रकम वडाले विनियोजन गरेको उनले बताउनु भयो ।